Fahad iyo Farmaajo oo fowdo la maaggan fadhiga Baarlamaanka | KEYDMEDIA ENGLISH
Fahad iyo Farmaajo oo fowdo la maaggan fadhiga Baarlamaanka
Bulshada Soomaaliyeed ayaa si weyn indhaha ugu heysa maanta xarunta Baarlamaanka, waxaana la dhowrayaa tallaabada ay qaadaan Kooxaha Ciidanka u badan ee Fahad ka amar qaata ee Baarlamaanka ku jira iyo kuwa KGS laga soo dooratay ee Farmaajo la safan.
MUQDISHO, Soomaaliya – Kooxda waqtigu ka dhamaaday ee Farmaajo iyo Fahad Yaasiin hoggaamiyaan, ayaa doonaya in maanta la carqaladeeyo kulanka wadajirka ah ee Golayaasha Baarlamaanka JFS, kaas oo lagu ansixinayo Xeerka doorashada Guddoonka labada Aqal.
Sida ay Keydmedia Online, ka soo xiganeyso xubno ka tirsan Baarlamaanka 11-aad, Fahad ayaa saraakiisha NISA, ee uu kuraasta Xildibaannimo u boobay ku amray in ay is hor istaag ku sameeyaan in maanta Golayaashu ansixiyaan Xeerka doorashada Guddoonnada.
Sidoo kale, Madaxweynihii hore Farmaajo, ayaa xalay lacag badan ku bixiyay in Xildhibaannada laga soo doorto Koofur galbeed aysan maanta tagin Villa Hargaysa, hayeeshee, qaar badan oo ka mid ah Xubnaha ka yimid Baydhabo ayaa arrinkaas diiday.
U jeedka Fahad iyo Farmaajo ka leeyihiin fowdada fadhiga Baarlamaanka ayaa ah in la carqaladeeyo doorashooyinka Guddoonka labada aqal oo la qorsheeyay in la soo af-meero ka hor dhamaadka bishaan, si loogu dareero doorashada Madaxweynaha dalka.
Fahad ayaa Maxakamadda sare, 19-ka bishaan oo beri ku beegan ka sugaya in ay u fasaxdo kursiga HOP086, ee uu ka soo boobay magaalada Baladweyne, inkastoo Guddiga Doorashooyinka heer Federaal sheegeen in lagu laabanayo doorashada kursigaas.
Fahad wuxuu doonayaa in Baarlamaanka 11-aad galo fasax, 10-ka danbe ee bisha ramadaan Xildhibaannaduna cumreysi aadaan, si uu fursad ugu helo meel ku ogaanshaha dacwadaha uu furtay, ee uu ku doonayo inuu kaka mid noqodo xubnaha Golaha Shacabka.
Fahad, wuxuu u sharraxan yahay xilka Guddoomiye ku xigeynka 1aad ee Aqalka hoose, kaasoo musharixiintiisu, shahaadada tartanka qaadanayaan shan maalin gudahood, waana sababta ugu weyn ee uu doonayo in dib loo dhigo doorashooyinka Guddoonka Golayasha.
Agenda-ha kulanka Golaaasha, ayaa ah, ansaxinta wax ka badelka Habraaca ku-meel-gaark ah ee u gaarka ah Doorashooyinka Guddoonka labada Gole iyo Madaxweynaha iyo warbixin ku saabsan hawlaha u qabsoomay iyo kuwa soo socda ee Guddiga Qabanqaabada.